यसो गर्नुहोस् ८० वर्षमा पनि २० वर्षको युवाजस्तै देखिन्छ ! – Saurahaonline.com
यसो गर्नुहोस् ८० वर्षमा पनि २० वर्षको युवाजस्तै देखिन्छ !
काठमाडौं, ३ बैशाख । वृद्ध उमेरमा गरिने प्रशस्त शारीरिक अभ्यासले रोग प्रतिरोधी क्षमतामा खस्कँन नदिने र संक्रमणविरुद्ध रक्षा गर्ने वैज्ञानिकहरुले जनाएका छन्। ८० वर्ष उमेर पुगेका १ सय २५ जना साइकलयात्रीका बारेमा गरेका अनुसन्धानबाट वैज्ञानिकहरुले उनीहरुमा २० वर्षका युवामा जस्तै रोग प्रतिरोधी क्षमता भएको पाएका थिए।
अध्ययनमा सहभागी किङग्स कलेज लण्डनका प्राध्यापक नर्मन लाजारस शारीरिक अभ्यासबाट फाइदा हुने हुनाले सबैले यसलाई आफ्नो जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘शरीर, मष्तिष्क, मांसपेशी र प्रतिरोधी प्रणालीका लागि यसको व्यापक उपयोगिता छ,’ उनी भन्छन्। यो अध्ययनबारे ‘एजिङ सेल’ नामक जर्नलमा प्रकाशित छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले अध्ययनका लागि रगतमा टी–सेल्सको उपस्थिति हेरेका थिए । यो कोषले नयाँ संक्रमण हुन नदिने काम गर्छन् र यी छातिको थाइमस नामक ग्रन्थीमा उत्पादन हुन्छन्।
अनुसन्धानका क्रममा पनि साइकलयात्री वृद्धहरुमा टी सेल्सको तह २० वर्षको उमेरका युवाहरुमा जत्तिकै उत्पादन भएको पाइएको थियो। साइकलको प्रयोगले वृद्ध उमेरसंग सम्बन्धित मांसपेशी घट्ने र शरीरमा चिल्लो बढ्नेजस्ता समस्या निम्तन पनि दिँदैंन। बर्मिङघम विश्वविद्यालयको इन्सिच्युट अफ इन्फ्लामेसन एण्ड एजिङकी निर्देशक ज्यानेट लर्डका अनुसार २० वर्षको उमेरपछि मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता २ देखि ३ प्रतिशत घट्दै जान्छ।
यहीकारण वृद्ध उमेरमा रुमाटोइड आर्थराइटिस, क्यान्सरजस्ता रोग निम्तन्छन् । अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्, ‘वृद्ध उमेरमा पनि शारीरिक रुपमा सक्रिय हुँदा भ्याक्सिनलेजत्तिकै काम गर्छ र रुघाजस्ता संक्रमणबाट बचाउँछ ।’
नेपाल-चीन व्यापारमा अवरोध २०७७, १२ माघ सोमबार
भारतीय बाटो हुँदै नेपालीलाई अवैधरुपमा कतार लगिदै २०७७, १२ माघ सोमबार
जान्नुहोस्, योगा गर्नुको फाइदा के के छन् ? २०७७, १२ माघ सोमबार